Okthobha 2020-Funda ukurhweba
Inyanga: October 2020
Zifundise Uhlalutyo lobuGcisa
UMHLAHLELI WOBUCHULE UBA ZINTLEKO EZISENGCIPHEKO
Ngokwe-Investopedia.com, uhlalutyo yobugcisa Ingqeqesho kwezorhwebo eqeshwe ukuvavanya utyalomali kunye nokuchonga amathuba orhwebo ngokuhlalutya iindlela zamanani aqokelelwe kwimisebenzi yorhwebo, njengokuhamba kwamaxabiso kunye nomthamo. Ngokungafaniyo nabahlalutyi abaphambili, abazama ukuvavanya ixabiso langaphakathi lokhuselo, abahlalutyi bobuchwephesha bagxila kwiipatheni zokuhamba kwexabiso, imiqondiso yokuthengisa kunye nezinye izixhobo zokutshekisha zokuvavanya amandla okhuseleko okanye ubuthathaka.
Umfazi oshishino ufunda imakethi yezemali ukubala umngcipheko kunye neenzuzo. Ingcali yezoqoqosho yabasetyhini imali eneenkcukacha zegrafu ekhomba kwiscreen sekhompyuter kwidesktop. Iintelekelelo zeendleko zotshintshiselwano
Ngokunikwa inkcazo engentla, ungabona ukubaluleka kohlalutyo lobuchwephesha ngokubhekisele kurhwebo. Nangona kunjalo, abantu abaninzi abaqondi ukuba yintoni, ungasathethi ke ngendlela yokuyisebenzisa kurhwebo lwabo. Uninzi lwabafundi kunye neendwendwe kwizabelo, i-cryptocurrensets, i-forex, izinto zorhwebo, njl uhlalutyo yobugcisa, kwaye ke bakhetha ukungawahoyi kwaye bafunde amanqaku abawaziyo endaweni yawo (anje ngeendaba ezisisiseko zeemarike kunye nezifutshane).
Nokuba kwishishini lokugcina imali encinci, ibango le umhlalutyi wobugcisa iyoma, ngakumbi phakathi kobusika be-crypto, kunye neemarike zeebhere ezinde.
Akumangalisi ukuba umhlalutyi wezobuchwephesha abe luhlobo olusengozini, kuba uninzi loluntu aluwuqondi umsebenzi wethu kwaye ke abanamdla kuhlalutyo lwethu. Esi sesinye sezizathu zokuba umsebenzi womhlalutyi wezobuchwephesha usongelwe.
Xa uluntu ngokubanzi lusazi ngakumbi malunga izikhombisi zobugcisa, Baya kutyekela ekufundeni uhlalutyo lobugcisa kwiimarike, nanini na xa befumana i-intanethi. Bayakuxabisa okwenziwa ngumhlalutyi wobuchwephesha kunye nomzamo emva kwezo mveliso zobugcisa. Baya kuba nakho ukuqonda ukuba yintoni umhlalutyi wezobuchwephesha anayo engqondweni kunye nendlela iingcinga zabo ezinokusetyenziswa ngayo kwizixhobo zemali.
Okubaluleke ngakumbi, abantu baya kuba nakho ukufaka isicelo uhlalutyo yobugcisa kwintelekelelo yabo kunye notyalo-mali, neziphumo ezanelisayo. Inyani yile, xa isetyenziswe ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo, uhlalutyo lobuchwephesha luyasebenza.
Le ncwadi ikwayabo bafuna ukuqaphela ikhondo lomsebenzi njengomhlalutyi wobuchwephesha. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa nokuyiqonda; Kulula kakhulu ukuzazi. Inenkcazo yenyathelo ngenyathelo kwaye iya kukumilisela kwilizwe elinomdla Uhlalutyo lobugcisa.
Umxholo wale ncwadi wawushicilelwe ekuqaleni kwi-TRADERS '(https://www.traders-media.de/), kwaye iphinde yaveliswa ngemvume yabo yohlobo.
tags iincwadi, Zifundise Uhlalutyo lobuGcisa, Uhlalutyo Technical, Iincwadi zokurhweba
I-Chainlink (Qhagamshela) Uhlalutyo lwamaxabiso: I-LINK ibonisa imiqondiso yokuhla njengoko ijongene nokwaliwa kwi- $ 13 ePhakamileyo
Ukuhlaziywa: 31 October 2020
LINK iqala kwakhona ngokuhla ezantsi
I-crypto kusenokwenzeka ukuba ifikelele kwi-9 ephantsi. 63
Ixabiso langoku: $ 11.14
Intengo yeNtengiso: $ 4,351,047,564
Umthamo wokuThengisa: $ 1,670,028,120
I-Chainlink (LINK) Uhlalutyo lwamaxabiso ngo-Okthobha 31, 2020
Ixabiso le-LINK lenza uthotho lwezinto eziphantsi nezisezantsi. I-crypto ikwi-downtrend njengoko amaxabiso esenza ezantsi. Namhlanje, ixabiso liyabuyela emva kokwaliwa ukusuka phezulu kutshanje. Okwangoku, imarike iyehla njengoko amaxabiso eqhekeza ngaphantsi kwee-SMAs. Ikhefu elingezantsi kwee-SMAs liya kwandisa amathuba okuhla. Kwelinye icala, ukuba iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zibambe, iXRP iya kuphinda inyukele phezulu. Okwangoku, imarike iyawa.
Ixabiso le-LINK sele laphule ukuxhathisa kwesiteshi esihla. Ingqekembe ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho.
I-LINK / USD-4 Itshathi yeYure
Ukusuka kumaxabiso entengo, LINK kunokwenzeka ukuba iqhubeke ngokuhla. Ngo-Okthobha i-26, umzimba wekhandlela obuyileyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-50% yeFibonacci. Ibonisa ukuba i-LINK iyakwehla kwaye ifikelele kwinqanaba eliphantsi le-2.0 yeFibonacci. Ngamanye amagama, intengiso iya kufikelela kwinqanaba le-9.63 ephantsi.
tags LINK, I-LINK / i-USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-Bitcoin igcina i-Outlook efanelekileyo phakathi kweNkqubela phambili yezoQoqosho kunye nezeMali
Ukuhlaziywa: 30 October 2020
I-Bitcoin (i-BTC) ithengise kule veki ngesantya esiphezulu, njengoko irekhode iirekhodi eziphakamileyo ezingama-2020. Into enomdla kukuba, le ntsebenzo yonyuselo iyenzeka phakathi kokubethwa kabuhlungu kwiimarike ze-equity kubandakanya iNasdaq 100 (NDX), iDow Jones (DJIA), kunye ne-S & P 500 (SPX).
Ngokudibeneyo, i-cryptocurrency ebekiweyo ikhule malunga ne-4.3% kule veki. Nangona eli nani lokukhula lisenokungabonakali lininzi, lijonge ngasemva kwimeko yezoqoqosho yangoku ethwaxwa ziimarike, ikubonisa nje indlela encomekayo ngayo le ntengiso.
Okwangoku, ukusebenza kweBitcoin kutshanje kuyinike ukongama kweemarike ezingama-63%, okuye kwabangela iingxaki ezinkulu kwimakethi esele ibanjisiwe. Umzekelo, i-Ripple (i-XRP) ngoku ithengisa kwindawo ephantsi ebonwe ngo-2017, ebonisa ukuba ifuthe elibi kulawulo lweBitcoin lisebenza kulo lonke eli shishini.
Kwezinye iindaba, i-Iran ibe lilizwe lokuqala ukwenza iBitcoin njengeyona ndlela yokutshintshiselana esemthethweni. Esi sigqibo senziwe ngenxa yokutsala isohlwayo kwilizwe elivela e-US.
Kwakhona, iBitcoin-friendly Avanti Financial Group ifumene iphepha-mvume lokubhankisha ngokusemthethweni e-US, iyenza ukuba ibe yinkampani yesibini ukufumana iphepha-mvume elinjalo emva kweKraken.
Nokuba kunjalo, kuya kuba ngumdla ukubona ukuba intengiso ye-cryptocurrency ihamba njani kwiiveki ezizayo kwaye ukuba iBitcoin igcina ukusebenza kwayo okuqhubela phambili.
Amanqanaba aphambili eBTC okubeka iliso kwiKota ePhakathi-nge-Okthobha ye-30
I-Bitcoin ingenise ukudityaniswa okuncinci phakathi kwe- $ 13,600 kunye ne-13,100 yeedola. Abatyalomali balindele utyelelo kwakhona kwinqanaba eliphezulu le- $ 12,000, apho kulindeleke ukuba abathengi abaninzi badibane noololiwe. Elona nqanaba liphambili lokuqhekeka kweBitcoin yi- $ 13,860 ATH, ilandelwa yi- $ 14,000 yokumelana nengqondo.
Kwicala elisezantsi, ikhefu elingaphantsi kwenkxaso ye- $ 12,890 ye- $ inokubangela ukongezwa kwe-bearish eyongezelelweyo kwi-cryptocurrency kwixesha elikufutshane. Nangona kunjalo, i-bias iyonke ihlala iye phezulu.
Imali iyonke yentengiso: $ 395 billion
Imali yentengiso yeBitcoin: $ 250.7 billion
Ulawulo lweBitcoin: 63.2%
IJapan 225 (JP225USD) ifikelela kwi-Bearish Exhaustion, inokuthi ifikelele kwiNqanaba 22821 kwaye iphinde ibuye umva
IJapan 225 iyatshintsha-tshintsha kwindlela esecaleni ehamba ngezantsi kwenqanaba 23750. Ngo-Okthobha i-28, i-Japan i-225 iwele ezantsi kwinqanaba le-23066 kwaye yaqala kwakhona ukudityaniswa ngaphezulu kwenkxaso yangoku. Umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kuwa kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.272 Fibonacci ulwandiso.
I-Japan i-225 ikwinqanaba lama-39 le-Index yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba imakethi ikummandla weDowntrend kwaye ungaphantsi komgangatho ophakathi 50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zijonge phezulu zibonisa imeko yangaphambili.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, imarike inyukela phezulu. Nge-30 ka-Okthobha ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Isalathiso sinokuwela kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.272 yolwandiso lweFibonacci. Kwinqanaba le-22821.40.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 ziyehla ezantsi zibonisa imeko ye-bearish. I-JP225USD ingaphezulu kwe-30% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Kuthetha ukuba intengiso ikwizinga lokuqhubela phambili.
Isalathiso saseJapan sama-225 sisehla. Ukwehla ngoku kuphelile. Umzimba wekhandlela obuyileyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-78.6 Fibonacci. Kule ndawo ibuyiswayo, imakethi iya kuwa kwinqanaba le-1.272 kwaye ibuye umva. Nangona kunjalo, ukubuyela umva akuyi kuba kwangoko.
Uloyiko lokubuyela umva lubuyela eYurophu kwiiCoronavirus Lockdowns
Ukubuyiselwa kwezoqoqosho eYurophu kubanjiwe njengoko oorhulumente banyanzelisa imiqobo emitsha yokujongana ne-coronavirus, enokuthi ikhokelele lo mmandla kwenye imeko yokudodobala koqoqosho. Amazwe amane oqoqosho olukhulu kwi-eurozone angena kwiindlela ezahlukeneyo zokuzahlula, ecofa idatha yangoLwesihlanu ebone ukukhula kwekota yesithathu yemveliso.
Ukudodobala okutsha kungena, oorhulumente bathulula uncedo ngakumbi kwaye iBhanki eNkulu yaseYurophu ithembisa ukonyusa ukonyuswa kwemali phakathi kwemeko ewohloka ngokukhawuleza. Usekela-Mongameli u-Luis de Guindos uthe ukudamba okanye ukuthothisa akunakupheliswa kule kota.
Ukufunyanwa kwakhona kwe-eurozone emva kokubhloka kokuqala kwe-coronavirus entwasahlobo sele kukhangeleka ngathi yikati efileyo etsiba ngaphambi kweziganeko zale veki. Amanani omsebenzi ayewa, kwaye ishishini kunye nokuzithemba kwabathengi kwaqala ukushukuma emva kokunyuka kwehlobo.
Izitokhwe zaseYurophu zawa, kunye neStoxx yaseYurophu 600 kwiveki yesithathu elandelelanayo yokwehla. Impembelelo kwiindleko zokuboleka ngokuzimeleyo ziye zanyanzelwa kukuthengwa kweebhondi ze-ECB.
Ukuphendula kwintengiso kwi-inflation yaseYurophu
I-EURUSD ayikhathaleli kakhulu idatha yakutshanje kwaye ithengiswe okokugqibela nge-1.1676, apho ithe yatshintsha kancinci ngosuku.
Ukujonga ezona zinto ziphambili zokunyuka kwamaxabiso kwindawo ye-euro, ukutya, utywala, kunye necuba kulindeleke ukuba zibe nezona zinga liphezulu zonyaka ngo-Okthobha (iipesenti ezi-2.0 xa kuthelekiswa ne-1.8% ngo-Septemba), ilandelwe ziinkonzo (i-0.4% xa kuthelekiswa ne-0.5% ngo-Septemba. ). ), izinto ezingezizo ezombane ezenziweyo (-0.1% xa kuthelekiswa -0.3% ngoSeptemba) kunye namandla (-8.4% xa kuthelekiswa -8.2% ngoSeptemba).
I-EURUSD ikhuphe yonke imihla iphantsi ye-1.1661, ngaphandle kokuba abenzi bomgaqo-nkqubo bekhombise ngokuqinileyo ukwanda ngoDisemba. Ukukhula kwe-Upbeat eJamani kungadlala indima ekuxhaseni isaphulelo njengoko indawo leyo ithengisa tyaba kwi-1.1676.
tags ICoronavirus (COVID-19), I-European Central Bank (ECB), IYUROZONE, EURUSD
I-Shanghai SE ye-Index edibeneyo (i-SHCOMP) iyaqhubeka nokuhla isiya ezantsi, ngoMeyi iya kuguquka kwinqanaba le-3187
Iindawo eziKhuselekileyo: 3300, 3400, 3500
I-SHCOMP iboshwe phakathi kwamanqanaba 3200 kunye nama-3400 ukusukela ngoJulayi. Okwangoku, isalathiso siyawa kwaye sinokuphelisa ngokukhawuleza ukubaleka kwinqanaba le-3187. Oku kuthetha ukuba uluhlu lwamaxabiso asezantsi kunokwenzeka ukuba lwaphulwe kodwa ixabiso liya kubuyela kumda oboshwe kuluhlu.
I-SHCOMP iwele kwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index period 14. Isalathiso sikummandla wehlayo kunye nangaphezulu komgangatho ophakathi 50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihamba zisiya ecaleni zibonisa umgaqo wecala.
Isalathiso seShanghai SE sokudityaniswa kwesixokelelwano (i-SHCOMP). Ukukhupha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisezantsi. Ixabiso liphinde labuyisa inqanaba lama-3360 ukuphinda uqhubeke nokwehla. Ngo-Okthobha i-26 ye-downtrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Oku kuthetha ukuba i-SHCOMP iya kuwa kwaye ifike kwinqanaba le-1.272 yenqanaba leFibonacci. Owona mgangatho usezantsi ngowama-3187.19.
I-SHCOMP ingaphezulu kwe-30% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Ngaphandle koko, imarike ifikelele kummandla ogqithileyo. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka ecaleni zibonisa indlela esecaleni.
I-SHCOMP ikukuhla ezantsi. Ukuhla okwangoku kufikelela kukudinwa kwe-bearish. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kuwa kwaye ifike kwinqanaba 3187.19.
Ubuthathaka be-EURJPY buqhubeka phantsi kweNqanaba le-122.00 kwiNtengiso yeNtengiso
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Okthobha 30
Amandla okuthengisa kwi-EURJPY ahlala ehleli njengoko ubuthathaka bawo buqhubeka phantsi kwenqanaba le-122.00 ekupheleni kweveki kwangoko ngolwesiHlanu. Imingcipheko esezantsi iqhubekile nokulawula imali ye-Eurozone ngokuchasene neJapan Yen kwiimvakalelo zentengiso ezimbi ngenxa yomsinga oqhubekayo weCovid-19.
Amanqanaba okumelana: 127.07, 125.00, 123.37,
Amanqanaba enkxaso: 121.47, 119.31, 117.08
I-EURJPY yaphule amanqanaba aliqela enkxaso yenqanaba xa kuthelekiswa neseshoni yangaphambili. Emva kokonakala kwenqanaba lenkxaso le-122.37, inqanaba leengqondo le-122.00 laphulwa. Ukujonga imeko ebanzi, ngelixa ingezantsi kwenkxaso yokunyuka komkhondo, imeko ye-EURJPY kulindeleke ukuba ihlale inethemba.
Kwimeko ebanzi, isaphulelo esivela kwi-114.39 sibonwa njengesigaba sokukhula sexesha eliphakathi ukuya kwelide ngaphakathi kwendlela yexesha elide esecaleni. Ukukhula okungaphezulu kulindelwe ngelixa inqanaba lenkxaso ye-119.31 ibanjiwe. Ikhefu le-127.07 liya kujolisa ekubuyiseni i-61.8% ukusuka kwi-137.49 (phezulu) ukuya kwi-114.39 e-128.67. Nangona kunjalo, ukuqhawuka okuqinileyo kwenqanaba le-119.31 kuya kuba bubungqina bokuba i-rally iphelile kwi-114.39 kwaye ibuyisele ingqalelo kule ndawo iphantsi.
I-EURJPY Intsingiselo yexesha elifutshane: Qalisa
I-intraday bias ye-EURJPY ihlala ingalunganga okwangoku. Ukwehla okwangoku ukusuka kwi-127.07 kufanele ngoku kujolise ekubuyiseleni i-61.8% ukusuka kwi-114.39 ukuya kwi-127.07 kwi-119.25, kufutshane nendawo yenkxaso ephambili kwi-119.31. Izikhombisi zobuchwephesha ziphakamisa ukuthengisa imiqondiso kwixesha le-4 lexesha elinokwenzeka ukuba liqhubeke nokucinezela izinga lokutshintshiselana eliphantsi kule seshoni.
Ukukhangela inkxaso eyomeleleyo apho ukuze ubambe uxinzelelo olusezantsi lokubangela ukubuyela umva. Nangona kunjalo, ikhefu kwinqanaba lokuchasana elincinci le-122.37 liyafuneka ukumakisha ezantsi-zexesha elifutshane kuqala. Ngaphandle koko, imeko inokuhlala i-bearish kwimeko yokubuyela kwimeko yesiqhelo.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Nasdaq 100-Okthobha 30
I-Nasdaq 100 (NDX) ithengise ngesantya esihle izolo, njengoko umngcipheko wokutya uqalile ukungena kuzo zonke iimarike emva kokuthengisa okumangalisayo ngoLwesithathu. I-NDX inokuba sele isendleleni eya kwiseshoni eguqukayo namhlanje kulandela iingxelo ezininzi zemivuzo evela kwiingxilimbela zobuchwepheshe ezinje ngeApple (NASDAQ: AAPL), Facebook (NASDAQ: FB), Alphabet (NASDAQ: GOOG), kunye neAmazon (NASDAQ: AMZN).
Ngokudibeneyo, ii-behemoths zobuchwephesha zathumela amanani emivuzo eyomeleleyo, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo imeko yezoqoqosho ye-COVID-19. Zonke iinkampani ezine zithumele imivuzo engcono kunokuba bekulindelwe kunye neengeniso. Nangona kunjalo, iiyure emva kokuba la manani ehlile, i-Amazon kunye ne-Apple stocks zibone inyathelo elibi lamaxabiso ukuza kuthi ga ngoku; I-Facebook ihlala ingatshintshanga, ngelixa iAlfabhethi inyuka inyukele phezulu.
Ingxelo yemivuzo emikhulu emi-4
I-Apple irekhode ukukhula okukhulu kumanani ayo e-Q3 kwaye yenze irekhodi lokophula irekhodi le- $ 64.7 yezigidigidi. Nangona kunjalo, ubuthathaka bamva nje obubonwe kwintsebenzo yesitokhwe sika-Apple kunokwenzeka njengesiphumo sokuthengiswa kwe-iPhone ebuthathaka kunokuba bekulindelwe kulo nyaka.
IAmazon inike ingxelo ngamanani eQ3 aqinileyo ane- $ 12.37 ngesabelo ngasinye emva kokuxutywa, uqikelelo lwexilongo. Inkampani ikwarekhodishe i-96.1billion yeedola kwingeniso.
I-Alphabet Inc. irekhodile i-38.01 yezigidigidi zeedola kwingeniso yekota, ibetha uqikelelo lwe-35.35 yezigidigidi zeedola. Umphathi weAlfabhethi wathi le ngeniso yokutsiba yayisisiphumo sokwanda kwengeniso yomthengisi kulo lonke uphando kunye namaqonga e-YouTube.
Inombolo yabasebenzisi beFacebook yemihla ngemihla, eyona metric iphambili esetyenziswa ngabatyali mali ukuvavanya inkampani, yayikwi-1.82 yezigidigidi ngoSeptemba, i-12% yeYY spike. Nangona kunjalo, inkampani ilindele ukungaqiniseki okubonakalayo kumanani ayo kunyaka olandelayo.
Kuya kuba lunomdla ukubona indlela isalathiso esabela ngayo kuzo zonke ezi zinto phakathi kokunyuka kwezopolitiko e-US kunye nomtshangatshangiso wesibini wentsholongwane owonakalisa umhlaba.
I-Nasdaq 100 (NDX) yexabiso lokuqikelela - nge-30 ka-Okthobha
Amanqanaba okubonelela: 11495, 11560, kunye no-11890.
Amanqanaba okufuna: 11307, 11000, kunye no-10680.
I-Nas100 ibonakala ngathi iyavuseleleka kwintengiso ekhohlakeleyo kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo. Nangona kunjalo, isalathiso sahlangatyezwa ngoxinzelelo olutsha lwe-bearish kwi-11495 yokuxhathisa kwangoko namhlanje-esekwe kwidatha yangaphambi kokuthengisa. Nangona ukungaqiniseki kulawula imarike okwangoku, kufanelekile ukuba silindele inyathelo elifanelekileyo lentengo yokunyusa namhlanje.
tags NASDAQ, NDX, iindaba
I-USDCHF i-Upsurge Hits ye-14 yeentsuku eziPhezulu ngaphaya kwe-0.9150 Amanqaku njenge-Index yeDola yaseMelika isondela kwiinzuzo ezilungileyo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Okthobha 30
I-USDCHF iyanda ngomhla we-5th ngokulandelelana ngolwe-Sihlanu njengoko ukunyuka kwayo kubetha iintsuku ezili-14 ngaphezulu kwama-0.9150 amanqaku. Esi sibini sikhawulezise ukonyusa ukuxhaswa ngamandla asisiseko e-USD njenge-US Dollar Index ebambelela kwiinzuzo ezilungileyo ngaphezulu kwe-94.00.
Amanqanaba okumelana: 0.9296, 0.9241, 0.9165
Amanqanaba enkxaso: 0.9087, 0.8998, 0.8746
I-USDCHF ihlanganisiwe ngaphaya kwe-5 kunye ne-13 ye-avareji ehambayo kwaye ngoku ivavanya indawo ye-0.9160 / 65 yokumelana. Ikhefu elingasentla lingakhokelela kuvavanyo lwenqanaba le-0.9200. Nokuba kufutshane namanqanaba akhoyo ngoku kunokwandisa imeko yexesha elisondeleyo. Isilayidi esingezantsi kwe-0.9133 sinokunciphisa uxinzelelo lwe-bullish ukuveza inkxaso elandelayo kwi-0.9087.
Kwimeko ebanzi, ukwehla ukusuka kwi-1.0231 kubonwa njengenqanaba lesithathu lohlobo olusuka kwi-1.0342 (ephezulu). Akukho miqondiso icacileyo yokugqitywa okwangoku. Ekuqaliseni kwakhona, ithagethi elandelayo yi-138.2% yesimo sezulu esivela kwi-1.0342 ukuya kwi-0.9181 ukusuka kwi-1.0231 kwinqanaba le-0.8746. Nangona kunjalo, ukuqhawuka okunamandla kwenqanaba lokuxhathisa kwe-0.9296 kuya kuba luphawu lwangaphambili lokuguqula imeko kwaye kuya kutsalela ingqalelo kwinqanaba eliphambili le-0.9902 lokumelana nesiqinisekiso.
I-USDCHF yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: UkuHamba
Ukuqwalaselwa ngoku kugxile kwindawo yokumelana ne-0.9165 njengoko isaphulelo esivela kwi-0.9030 siqhubeka. Ikhefu eliqinileyo apho liya kubonisa ukuba ipateni yokulungisa ukusuka kwi-0.8998 iqale umjikelo wesithathu. Ii-oscillator zexesha elifutshane ngoku zibonakalisa ukuphucuka kwesantya esihle. I-RSI izama ukugcina indlela elungileyo eya kumanqanaba angama-70.
Ngokuyintloko, i-intraday bias iya kuba phezulu kwinqanaba le-0.9296. Ikhefu linokusondela ekubuyisweni kwe-38.2% ukusuka kwi-0.9902 ukuya kwi-0.8998 kwinqanaba le-0.9362. Kwelinye icala, ukuphuma kwenqanaba le-0.9030 kuya kuphinda kubuyekeze i-0.8998 esezantsi.
I-Binance (BNBUSD) Ixabiso; Ukwaphulwa kwangaphambili koNyulo lwama- $ 29 amaNqanaba amaxabiso ukuya kwiNyanga ngeXesha
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Okthobha 30
Ixabiso lijolise kwinqanaba lokuxhasa kwi-26 yeedola, ukuba ayibambi ingqekembe iya kunciphisa ukuxhasa inqanaba kwi-24 kunye ne-22 yeedola. Kwimeko apho ixabiso lamaxabiso angama- $ 26, linokutsiba kwaye lonyukele kwinqanaba lokumelana ne- $ 29, $ 31, kunye ne- $ 33.
Amanqanaba okubonelela: $ 29, $ 31, $ 33
Amanqanaba emfuno: $ 26, $ 24, $ 22
I-BNBUSD i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Ingqekembe ibiphantsi kolawulo lweenkomo kwiveki ephelileyo. Umfutho we-bullish utyhala ixabiso kwinqanaba lokumelana ne- $ 31 ngo-Okthobha u-15. Ixabiso libuyele umva kwaye liphinde libuyise inqanaba lenkxaso le- $ 29. Le ngqekembe yathintelwa ekungeneni kwinqanaba kwaye iinkunzi zeenkomo zayityhala ukuze ivavanye inqanaba lokumelana ngo- $ 29 okwesibini ngo-Okthobha u-28. Ixabiso liwa lingene kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 29.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, Okthobha 30
Ingqekembe iye yangena kwinqanaba lenkxaso eguqukayo esezantsi kunye nokwenziwa kwekhandlela le-bearish. Amaxesha e-9 EMA anqumla amaxesha angama-21 EMA kwicala elingaphantsi ukuseka intshukumo ye-bearish. Ixabiso lijolise kwinqanaba lokuxhasa kwi-26 yeedola, ukuba ayibambi ingqekembe iya kunciphisa ukuxhasa inqanaba kwi-24 kunye ne-22 yeedola. Kwimeko apho ixabiso lamaxabiso angama- $ 26, linokutsiba kwaye lonyukele kwinqanaba lokumelana ne- $ 29, $ 31, kunye ne- $ 33. Ixesha lesalathiso samandla xa kuthelekiswa ne-14 iyagoba kwinqanaba lama-40 elibonisa umqondiso wokuthengisa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BNBUSD inyulu. Isenzo sexabiso senze iphatheni yetshathi ebizwa ngokuba "yiPhindwe kabini"; Le yipateni yetshathi ye-bearish kwaye yile nto yenza ukuba ixabiso lehle liye kwinqanaba lenkxaso le- $ 26. Inqanaba langaphambili lenkxaso le- $ 29 liphendukele kwinqanaba lokumelana kwitshathi yeeyure ezi-4.
I-BNBUSD 4 itshathi yeeyure, Okthobha 30
Amaxesha ali-9 ama-EMA awele amaxesha angama-21 e-EMA ecaleni kwaye ingqekembe ithengisa ngezantsi kwee-EMA ezimbini. Ixesha lamaXabiso aMandla aNxulumene nesiKhombisi se-14 sikhomba ezantsi ukubonisa umqondiso wokuthengisa.